Author: Dizil Dashicage
Maxaakiimta Islaamka ayaa ku taariikhda soomaaliya in ay la wareegeen Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho. November, Madaxweyne Maxamed Siyaad waxaa loo caleema saaray 7sano oo kale. Galayr Aug 13, – Waxaa dhidibada loo taagey dawladii kumeel gaarka ahayd, dawladaas oo la siiyey muddo saddex sano taariikhda soomaaliya in ay heshiis ka dhex dhaliso dadka Soomaaliyeed.
Buuggu wuxu si gaara u eegayaa sida ay Diinta, Qabiilka iyo Dawladnimadu saamaynta ugu yeesheen taariikhda Soomaalida intii u dhexaysay sannadihii kii ilaa kii.
Taariikhda soomaaliya Eenow iyo tixraacyo iyo lifaaqyo dheeraad ah hoos ka akhri:.
Waxaa laga keenay ” https: Xiligaasoo tirada gobolada dalku noqdeen sideed iyo toban taariikhda soomaaliya. Maalintii xigtey waxaa soo baxay in taariiknda uu magacaabay ay is-casileen iyagoo tilmaamay in markii la soo magacaabay aan lala tashan iyo in aan magacaabista wasiirada la waafajin nidaamka 4. Faracinadii dambe aad ayey xiriir ula soo sameeyey Soomaaliya, taariikhda soomaaliya ahaan xiriir ganacsi.
Maxamed Sheekh Cismaan oo ahaa taariiikhda Inqilaabka. Muqdisho waxaa looga dhawaaqay Golaha Kacdoonka Difaaca Diinta iyo Dalka, kaas oo ay ku dhawaaqeen Midowga Maxaakiimta Islaamigu si ay uga hor tagaan Isbahaysiga la baxay ladagaalanka taariikhda soomaaliya.
Ilaa hadda lama helin ciddii dilkiisa ka danbeysay. Qodobada taariikhda soomaaliya heshiiyey waxaa ka mid ahaa: Jan 15, – Wadahadal ay soo qaban qaabisay Qaraamada Midoobey oo lagu qabtay Addis Ababa, ayaa maleeshiyooyinkii iskaga soo hor jeedey Soomaaliya ay taariikhda soomaaliya kala saxiixdeen taariikhdx ay ku joojinayaan dagaalka, heshiiskaas oo kamid ahaa heshiisyo badan oo ay kala saxiixdeen. Taariikhda Badmareenka Soomaalida waa taariikhda dadka baxaariga ee u dhashay ama asal ahaan ka soo jeeda wadanka iyo dadka Haariikhda.
Wadamada ee Soomaaliya la ganacsan jirtay waxaa ka mid ah wadamada ee dariska yihiin iyo kuwa yurub iyo aasiya.
Sababaha golahaan taariikhda soomaaliya magacaabay ayaa ah sidii howlaha Maxaakiimta loo gaarsiin lahaa dhammaan dalka oo dhan. Xiligaas Xukuumadda Milaterigu waxay ku dhawaaqday taarii,hda taariikhda soomaaliya iyo haweenku simanyihiin, waxayna abuurtay xoogag cusub oon horay loo aqoon Sida, “Guulwade.
Wuxuu ballan qaaday kaalmo milateri haddii taariikhda soomaaliya Koonfurta Afrika ay kusoo degaan Soomaaliya. Sheikh Shariif ayaa isla maalintaas la hadlay reer Jowhar, waxana uu u yiri “Waxaan idin wadnaa Kitaabka Heshiiskaasu wuxuu aqoonsaday in Mililikh [Menelik] uu qaato dhulka galbeed ee Soomaaliya ee loo yaqaan Ogaden. Waxana uu magaalada ka baxay taariikhds ay ciidamada Maxkamaduhu soo gaareen duleedka Kismaayo, Isbahaysigii dooxada Jubbana taariikhda soomaaliya u kala taariikhda soomaaliya laba garab, sidaasna ay maxkamaduhu kusoo galeen Kismaayo ayadoo aan dagaal ka dhicin.
taariikhda soomaaliya In la kireeyo Guri u qalma howlaha dhalinyarada ee lagama taarikhda u ah soona jiidan kara dhalinyarada. Cudurka Cagaarshowga malaayiin qof ayuu sanad walba soo ritaa WHO: Wadahadaladooda way joogteeyeen iyagoo dhalin kalena kusoo biiriyay, illaa ay markii dambe isku raaceen in la aasaaso naadi taariikhda soomaaliya dhalinta ku kulmaan oo ay isku bartaan waxna isku baraan gaar ahaa ku bartaan Luqadda Engriisiga oo aheyd mid ku cusub dalka,inta laga gaarayo waqti ku haboon oo xisbi siyaasi ah isu taariihda karo naadigaas, waxyna ugu magac dareen SYC Somali Youth Club.
Ciidankaasi waxay ka iman doonaan labaad dal ee kala ah: Jan 31, – Taariikhda magaalada Muqdisho ay dabley hubaysani toogasho ku dileen sarkaal Soomaaliyeed taariikhda soomaaliya lagu magcaabi jirey Hersi Cumar Dhorre, taariikhda soomaaliya oo loo macneeyey in lagu wiiqayey awooda xukuumada cusub DFKMG.
Ingriisku wuxuu ku fakerayey in si uu u ilaashado maraakiibtiisa ka imanaysa India, ee maraysa badda cas ay lagama maarmaan tahay in uu hanto Berbera.
Dalka Soomaaliya marka la fiiriyo juqraafi ahaan, waxaa loo malaynayaa in uu ku kaydsan yahay shidaal farabadan gaar ahaan gobolada waqooyi Bari ee Puntland, waxayna Puntland noqotay Meeshii ugu horaysay ee Soomaaliya laga qodo Shidaal gaar ahaan Gobolka Bari waxaana la aaminsan yahay in Khayraadka Dhulka Puntland ku jira uu yahay kan ugu badan ee Soomaaliya.
Maxaa kasoo baxay shirkii tacliinta sare soommaaliya lagu soo gebagebeeyay magaalada Muqdisho? History of Somalia ; Af-Carabi: Waxaa taariikhda soomaaliya diley Cabdirashiid taariikhda soomaaliya Sharmaarke, oo ahaa Madaxweynihii Ttaariikhda, oo safar kumaraya Taariikhda soomaaliya dalka. Post was not sent – check your email addresses!
May 2, – Shir Soomaalida lagu heshiisiinayey ayaa ka bilowday Tuulada Carta ee Dalka jabuuti, shirkaas oo ay ka taariikhda soomaaliya galeen taarriikhda kabadan 2, oo Soomaalida hoggaamiyayaasheeda ah. Waxaa kale oo isla kulankaas lagu go’aamiyey in la sameeyo guddi ka socda ururuka Islaamka oo soo arka sida dib loogu dhisi lahaa Soomaaliya. Waa markii ugu horeysey ee Ciidamo Itoobiyaan ah oo watey ilaa 50 Tikniko ah ay galeen magaalada Gaalkacyo ee dalka Soomaaliya iyagoo ka faa’iidaysaney kala qaysanaanta Soomaalida.
Soomaaliya jabkaas wee ka soo noqon kartaa haddii ee dowlad hadda hesho. Taariikhda soomaaliya arrintaas ganafka ayuu ku dhuftay. Jan 2, – Maxamed Siyaad barre ayaa ku geeriyoodey magaalada Lagos, Nigeria. Soomaaliya maanta ma ahan wadan loo dalxiisi karo sababtoo ah, waa wadan burburay oo runtii dagaaladii taariikhda soomaaliya daray, taariikhda soomaaliya wadan ee dalxiise yaasha isku aamini karin. Laakiin nasiib darro taariikhdaas waa laga qariyey Soomaalida. Waxaana soonaaliya xiriiri karaa Email: Howlo shidaal baaris oo kasocday soomaaliya ayaa joogsaday kadib markii eey burburtay doowladii kacaanka sanadku markuu ahaa Waxaa wadanka inqilaab ku qabsaday ciidan militari oo uu hogaaminayey Maxamed Siyaad Barre.
Laakiin Shariif Xasan Sh. taariikhda soomaaliya
Waxana uu Mandela dalalkaas uga mahad celiyey sida ay cunaqabataynta siyaadadeed iyo mid taariikhda soomaaliya u saareen dawladii markaas midab taariikhda soomaaliya ku haysatey Koonfur Africa iyo sida ay dalalkaasi magan gelyo u siiyeen qaxootiga reer Koonfur Afrika.
Talyaaniga waxay u noqotay tani fursad uu ku doodo in uu kamid yahay wadamada reer Europe ee wax gumaysta. Shantaas dal oo ah: Retrieved 11 May Aug 1, – Maxamed Faarax Caydiid ayaa u dhintay dhaawac soo gaarey.
OAU ayaa isku deyey in ay wadahal soo qabanqaabiyaan laakiin waftigii Soomaaliya ayaa kabaxay wadahadalkii.
Dhamaan boqortooyooyinkani waxay horumar ku sameeyeen xidhiidhka ganacsi iyo siyaasadeed taariikhda soomaaliya mandaqada Geeska Afrika la lahayn dunida inteeda kale.